दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस तपाइको यो साता कति शुभ ? जेठ १० गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल – Complete Nepali News Portal
दक्षिणकाली माताले सबैको कल्याण गरुँन ! हेर्नुहोस तपाइको यो साता कति शुभ ? जेठ १० गते सम्मको साप्ताहिक राशिफल
ScotNepal May 20, 2020
२०७७ ज्येष्ठ ४ गते देखी ज्येष्ठ १० गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल (ज्यो.प.सरोज घिमिरे)
मेष राशि (चु, चे, चो, ला, लि, लु, ले, लो, अ) साताको प्रारम्भमा आर्थिक क्षेत्रमा सामान्य समस्या आईपर्नेछ । देश परदेशको यात्राको सम्भाबना रहनेछ । गरीरहेको कार्यमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुनाले कार्य ढिलाईको सम्भाबना रहनेछ । स्वास्थका क्षेत्रमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँ लगानि गर्नका निम्ती बिशेष सजग रहनु पर्ने समय रहेकोछ । मगंलबार पश्चात भने कार्य क्षेत्रबाट आफन्तजनहरुको मनजित्न सफल रहिनेछ ।सामान्य पारीवारिक झोरझमेलाको सामना गर्नु पर्नेछ । ब्यापार ब्यवसायमा हानिको सम्भाबना रहेकोले साबधानि पूर्बक अघि बढ्नुहोला । अध्यन अध्यापनमा समय मध्यम रहनेछ । साताको अन्त्यतिर भने सभासम्मेलनमा सरीकहुने अवसर प्राप्त रहनेछ । कला कौलशताको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । योसाता आर्थिक क्षेत्रमा साबधानि रहनु होला ।
मीन राशि (दि, दु, थ, झ, ञ, दे, दो, च, चि) पारिवारीक साथ सहयोगद्वारा अधुरा कार्यहरु सम्पादित रहनेछन । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा उत्तम समय रहेकोछ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगनशिलताका कारण आफन्तजनहरुको मनजित्न सकिनेछ । अध्यनअध्यापनमा रुचि बढ्नेछ । प्रेमसम्बन्धमा प्रगाढता छाउने समय रहेकोछ । मगंलबार पश्चातभने स्वास्थमा सामान्य समस्या उत्पन्न हुन सक्नेछ । आफन्तजनहरु सगँको सम्बन्धमा सामान्य तिक्तता उत्पन्न हुने सम्भाबना रहेकोछ । अरुको बिश्वासमा कुनैपनिकार्य नसुम्पिनु होला अन्यथा ब्यबाहारीक झन्झटमा फसिने सम्भाबना रहेकोछ । साताको अन्त्यतिर साथिभाईहरुको साथसहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । मान्यजनहरु सगँ सामान्य मनमुटाबको सम्भाबना रहनेछ । योसाता नयाँलगानिमा बिशेष ध्यान पूर्याउनु होला ।